Saka Wasarudza Kuvandudza Cognos ... Zvino Chii? - Motio
by MotioSep 22, 2021Cognos Analytics, Cognos Performance, Ndiwedzere Factory0 mashoko
Kana uri nguva refu Motio muteveri, iwe unozoziva kuti isu hatisi vaeni kuCognos kukwidziridzwa. (Kana iwe uri mutsva ku Motio, Mauya! Tiri kufara kuva newe) Isu takadaidzwa kunzi "Chip & Joanna Gains" yeCognos Upgrades. Zvakanaka mutongo wekupedzisira uyu kuwedzeredza, zvisinei, isu takagadzira nzira yeDI yeCustomos vatengi kuzvisimudzira.
Unyanzvi hwatisati tavhara ipfungwa yekuti iwe unogona kuburitsa yako Cognos kukwidziridzwa. Hazvisi nyore sekuhaya timu uye kumuka kune inoshanda zvizere, yakatama nzvimbo yeCognos. Asi zvakare haina kuoma.
Takagara pasi nemutengi weCognos Orlando Utilities Commission, avo vakaburitsa kunze kwavo kuCognos 11. Chikwata cheOUC chakakwidziridzwa kusvika kuCognos 10 pachavo zvakatora mwedzi mishanu. Kana ivo vakaburitsa kunze kwavo kukwidziridzwa, maitiro ese aingotora mavhiki masere. Ashish Smart, Enterprise Architect, akagovana zvidzidzo zvakadzidzwa nechikwata chake kuburikidza neyakagadziridzwa nzira nesu. Akaona kuti timu yake yakatevera nzira dzakanakisa dzekusimudzira kweCognos.
Kuita kwakanyanya Gadzirira uye Geza Kusvikira KuNzvimbo Yakatetepa:
1. Batanidza vashandisi pakutanga mukuita, uye kurudzira nyanzvi dzenyaya dzenyaya kutora chikamu. Vabvumire kuchenesa Cognos uye kuita iyo UAT kuyedzwa. Ivo vanogona kudzokorora zviri mu "My Folders" kuona kuti chii chinofanirwa kufambiswa kana kwete.
2. Uri kuzotama zvinhu zvakawanda. Chenesa yako isiri-yekugadzira nharaunda. Uchaona kuti zvinhu zviri kunze kwekuyanana pakati pekugadzira uye isiri-yekugadzira. Izvi zvinokubatsira iwe kusarudza kana iwe uchida kuenda kuburikidza nekuyedza kuyananisa iwo maviri kana kuvimba ne backup. Nekufukidza mishumo yekugadzira, izvi zvinoderedza kusagadzikana.
Maitiro akanakisa: Shandura Zvakawanda sezvaunogona
3. Insert zvinokurudzira kuti zvoga yokuedzwa. Izvi zvinobatsira pakunzwisisa mashandisiro anoita vashandisi vebhizinesi nemishumo.
4. Invest in administrator uye pabasa (OTJ) training. Ita shuwa kuti iwe uzadzise admin kudzidziswa kutanga saka kana shanduko dzekugadzirisa dzichikurudzirwa, unogona kuzvifambisa munzvimbo yako yeramangwana. Kana wasangana nekuyedzwa, unogona kudzivirira kunetseka kwekupedzisira.
Maitiro akanakisa: Ita shuwa Sandboxes Ari Kuita Zvakanaka
5. Chengetedza nzvimbo yekudzidzira pamwe nemimwe mienzaniso / mishumo yakakurumidza. Shandisai Cognos 11 muenzaniso wevashandisi vemasimba uye varairidzi chaizvo kuti vagone kupinda pakutanga. Chikwata chako chinogona kutamisa epakati matemplate / maripoti kutanga kuve nechokwadi kuti vanoenda kune imwechete dhatabhesi uye vanowana zvakafanana mhedzisiro. Izvi zvinopa vanogadzira nevatengi mukana wekutamba kare.
6. Nharaunda yeSandbox inokudzivirira kubva kushanduko. Bhokisi rejecha rinovimbisa kuti Kugadzira hakufanirwe kumira kushandira vashandisi vebhizinesi. Neyekunze, OUC yekugadzira chando yakaenda kubva kumavhiki kusvika kungori mazuva 4-5 pakupera kwevhiki. Izvi zvinoita kuti vashandisi vekupedzisira vasavhiringidzika uye vanogona kutarisa pane zvinoitwa zuva nezuva.
Ashish akawedzera dzimwe pfungwa dzekupedzisira. Ramba wakarongeka, chengeta yakanaka pfungwa, uye ongorora kufambira mberi. Nekutsvaga kunze kwekusimudzira, OUC yakakwanisa kugara pamberi pemakwikwi, kudzivirira zvinokanganisa nehurongwa, uye kudzivirira matambudziko asingatarisirwe ekumisikidza.
Dzidza maitiro aungaita kuti uvandudze yako yekuvandudza seOUC mune Ndiwedzere Factory.
Abstract IBM Cognos Analytics yakatemwa nezita reWatson muvhezheni 11.2.1. Zita rake rakazara rava IBM Cognos Analytics ine Watson 11.2.1, yaimbozivikanwa seBMM Cognos Analytics. Asi uyu Watson aripi uye anoitei? Mu...